QGIS 3.0 - Kedu, mgbe na ihe; pụtara - Geofumadas
QGIS 3.0 - Kedu, mgbe na ihe; ọ pụtara
Jenụwarị, 2016 qgis
Ọtụtụ n'ime anyị na-eche, sị:
Kedu mgbe a ga-ahapụ QGIS 3.0?
N'afọ gara aga (2015) òtù ọrụ ahụ malitere ịchọpụta oge na otú QGIS 3.0 ga-esi tọhapụ ya. Ha kwere nkwa, dị ka post si Anita Graser, nke ha ga-ezigara ndị ọrụ na ndị mmepe nke atụmatụ ha n'ụzọ doro anya tupu ha ahapụ QGIS 3.0. N'oge na-adịbeghị anya, ha gbalịrị ịtọpụ ụfọdụ echiche maka nnwere onwe nke QGIS 3.0 ma na njedebe nke post, enwere ohere iji gosipụta echiche anyị.
Ntak emi 3.0?
A na - edebe ụdị nke isi maka oge mgbe agbanwere nnukwu mgbanwe na API ngwanrọ gị. Nkwụsị a abụghị mkpebi dị ntakịrị maka ọrụ QGIS ebe anyị bụ otu narị puku ndị ọrụ na-adabere na QGIS, maka ojiji anyị na ọrụ enyere ndị ọzọ.
Site n'oge ruo n'oge na-agbawa API dị mkpa iji nweta mmelite nke ihe owuwu na imeziwanye nke ịbịaru nso, ụlọ akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ na ndozi maka mkpebi ndị emere n'oge gara aga.
Kedu ihe ga - esi na - agbasa API?
Otu ihe mere nke a iro nke API na QGIS 3.0 bụ na ọ ga-a nnukwu mmetụta, nke pụrụ imebi ọtụtụ narị mepere plugins na-agaghịzi na-dakọtara na ọhụrụ API na ndị dere ihe ndị a ga-eme a nyochaa ihe omume ya iji hụ na ọ bụ API ọhụrụ.
Ogologo mgbanwe ndị dị mkpa dabere na:
Mgbanwe ole API na-emetụta ọrụ dị ugbu a.
Kedu ka ọtụtụ ndị na-edepụta ndị nrụnye mgbakwunye jiri akụkụ nke API ha ga-agbanwe.
Kedu ihe ga - abụ mgbanwe kachasị maka 3.0?
Enwere isi ihe anọ dị na ị na-achọ ịgbanwe na 3.0:
Melite Qt4 ka QT5: Nke a bụ usoro ụlọ akwụkwọ kachasị elu nke a na-ewu QGIS na ọkwa elu, anyị na-ekwu maka ọkwa ọkwa CORE-platform nke ikpo okwu. QT na-enyekwa ọba akwụkwọ iji mezuo njikwa ebe nchekwa, arụmọrụ njikọ, yana njikwa eserese. Qt4 (nke QGIS nọ na ya ugbu a) abụghị nke ndị na-ahụ maka Qt n'ọbá akwụkwọ na-emepe emepe ugbu a ma nwee ike ịnwe nsogbu gbasara arụmọrụ na ụfọdụ nyiwe (dịka ọmụmaatụ, OS X) yana ọbụlagodi njikwa nke ụdị nke ọnụọgụ abụọ (dịka ọmụmaatụ Debian Testing na ụdị Debian "Stretch"). Usoro nke iweta QGIS na QT5 enweworị ọganihu dị mkpa (ọkachasị ihe Matthias Kuhn mere) ndị ya na Marco Bernasocchi na-a smokeụ sịga na gam akporo «QField» dabere kpamkpam na QT5. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ mmachi na ịmalite QT5 ọhụrụ n'ihi mmetụta ọ nwere na QGIS - ọkachasị na wijetị ihe nchọgharị weebụ (ọkachasị iji ya na Composer na ụfọdụ ebe ndị ọzọ na QGIS).
Melite PyQt4 ka PyQt5: Ndị a bụ mgbanwe mgbanwe na asụsụ Python maka Qt nke QGIS Python API dabeere. Edemede ịgbanwe QT5 C ++ Ọbá akwụkwọ, a na-atụ anya na-nyefee PyQt5 eke n'ọbá akwụkwọ nke mere na ha nwere ike iri uru nke uru nke ọhụrụ API na Python QT5.
Imelite Eke Ọgba 2.7 na Python 3: Ugbu a ihe niile na-agba ọsọ na Python 2.7. Python 3 bụ Python nke kachasị ọhụrụ ma ndị na-eduzi ọrụ ahụ na-atụ aro ya. Python 2 adabaghị adaba na Python 3 (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ekwekọghị na QGIS 2 na Qgis 3). Ọtụtụ ndị mmepe emeela Python 3 Python 2 ọ dabara adaba na Python XNUMX, mana ndakọrịta azụ abụghị nnukwu.
Imelite nke QGIS API n'onwe ya: Otu nsogbu na ijigide ndakọrịta API n'etiti nsụgharị bụ na ị ga-ebi na nhọrọ imewe gị ogologo oge. Na QGIS, a na-agba mbọ ka ị ghara imebi API n'ime obere usoro. Tọhapụ ụdị QGIS maka 3.0 yana API nke na-adabaghị na nke ugbu a ga-enye ohere "ihicha ụlọ ahụ" site na idozi ihe ndị dị na API nke anyị na ya nwere na esemokwu adịghị. Pụrụ ịhụ a nwa oge ndepụta nke Mgbanwe ndị a gbanwere maka 3.0 API.
Otu esi akwado nkwado nke 3.0 API
Dịka anyị kwurula, ụdị 3.0 ga-agbaji QGIS mbipute 2.x ma enwere ike na ọtụtụ plugins, ngwa ndị dị ugbu a na koodu ndị ọzọ dabere na API dị ugbu a ga-agbaji. Ya mere, gịnị ka a ga-eme iji belata mgbanwe ndị ahụ? Matthias Kuhn, Jürgen Fischer, Nyall Dawson, Martin Dobias na ndị mmepe ndị ọzọ nọ na-achọ ụzọ isi belata ọnụ ọgụgụ mgbanwe nke API ka ọ na-aga n'ihu na-eme ka QGIS codebase dabere na ọgbọ akwụkwọ ndị na-esote yana API nke ya. N'oge nzukọ ikpeazụ anyị nke Kọmitii Na-ahụ Maka Projectlọ Ọrụ QGIS, anyị gụrụ ọtụtụ ọrụ. Tebụl na-esonụ na-achịkọta ihe Matthias Kuhn ji amara chịkọta yana na anyị anwaala ịtụgharị asụsụ ederede n'isiokwu a dịka ihe ezigara ya blog:
Ụbọchị ntọhapụ Ọgwụgwụ nke February Ọnwa 4 ka e mesịrị 2.14 Mgbanwe ọnwa 8?
Ihe edeturu Melite koodu QGIS bụ isi ederede dị ka Python 3 dakọtara na PyQt5 dakọtara (mmejuputa anya n'ihu maka ọrụ isi dika egosiputa, isi ihe ntanetị wdg.)
Deprecated na Debian Stretch (ruru na otu afọ)
(ewepubere ebe nrụọrụ weebụ)
Agbaghara QWebView - nhichapụ ọhụrụ ọ bụghị na nhazi niile. Echekwala QPainter Engine.
PyQt4 Si Si Mba
PyQt5 Mba Si Si
Python 2 Si Si Mba
Python 3 Mba Si Si
API dị ọcha Mba Mba Si
Ndị na-ekpo ọkụ
Na-enye ~ 90% Ntanye Agbanwe Mba Si Si
Ego ọnụọgụ abụọ Qt4 Dabere Qt4 Dabere Qt5 Dabere
Ịkwụ ụgwọ ego Eke Eke Eke
E nwere ihe abụọ dị mkpa ị ga-eburu n'uche banyere ihe Matías kwuru:
Na nke mbụỌrụ a na-eme n'ime usoro iji wuchaa 2.x support QT5, PyQt5 iji Python 3.0, na-akwado Qt4, PyQt4 na Python 2.7. Nke a na-egosi na ihe niile mgbanwe mere ke akpa na-adọ ga-dakọtara na mbụ na nsụgharị 2.x. Python atụmatụ a ga-ẹkenam ga-webatara otú ochie API PyQt4 ka nwere ike a ga-eji karịsịa mgbe weere megide QT5, PyQt5, Python 3.0. Site na iji QGIS weere megide Qt4, PyQt4 na Python 2.7 agaghị agbaji ndakọrịta.
Na nke abụọ, anyị ga-arụ ọrụ iji mepụta QGIS 3.0, na-ewebata API ọhụrụ ahụ, a ga-ewepụ kpamkpam kpamkpam Python 2.7, gụnyere nkwado maka Qt4 na PyQt4. A ghaghị ịnọgide na-arụ ọrụ ọhụrụ nke arụmụrụ ọhụrụ nke a ga-ebute na mpaghara mbụ, na-eburu n'uche na ihe niile ederede na ihe omume nke 2.x nke QGIS ga-anọgide na-arụ ọrụ na mbipụta 3.x nke QGIS. Na nke a, a na-atụ anya ka ịmepe mgbanwe ndị dị na QGIS API nke nwere ike imebi plugins. Iji mee nke a, anyị ga-enye nduzi mwepụ iji gbalịa ikwado usoro mwegharị nke nsụgharị 2.x QGIS na nsụgharị 3.x QGIS.
E nwere ụzọ aghụghọ abụọ a ga-atụle iji jide n'aka na mbugharị na QGIS 3.0 anaghị ada ụda.
1. AKW .KWỌ SEkwesiri ighota na mgbe uzo a edeputara n’elu na-anwa iwelata ego nke oru na ederede Python na plugins, nke a agaghi aburiri 100%. O yikarịrị ka ọ ga-abụ ikpe ebe a ga-emegharị koodu ahụ ma n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ dịkarịa ala, ọ ga-abụ na e degharịrị iji hụ na ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma.
2. Enweghi ego iji guzobe ego iji kwụọ ndị mmepe na-eji aka ha etinye oge ha maka usoro Mbugharị a. N'ihi nke a, ọ ga-esi ezigbo ike ịnye oge maka oge ọ bụla akụkụ nke usoro a ga-ewe. A ghaghị iburu ejighị ihe n'aka a n'ime atụmatụ. N'ezie, a na-anabata onyinye iji nyere aka mee nke a.
3. Enwere ike inwe ndị mmepe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado atụmatụ ọhụrụ maka usoro QX 2.x QxIS ma nke a nwere ike imetụta ọrụ gị. Ọ dị mkpa itinye na atụmatụ na mmefu ego nke ọrụ ndị a, ụfọdụ oke iji chee ihu na Mbugharị na ikpo okwu 3.x nke QGIS.
4. Ọ bụrụ na ndị ọrụ QGIS na-arụ ọrụ na "mgbanwe zuru oke", a ga - enwe obere oge QGIS ga-akwụsi ike ma gbanwee oge niile n'ihi mmelite na-aga n'ihu na QGIS 3.0.
4. Ọ bụrụ na ịmalite na ụzọ 'evolutionary', ị nwere ihe egwu na mmepe 3.0 nwere ike iwe ogologo oge belụsọ ma ị nwere otu ndị nwere ntụkwasị obi nke ndị mmepe na-arụ ọrụ na ya ma na-akwado gị ịkwaga.
N'ihe banyere ozi niile ahụ dị n'elu, otu n'ime usoro abụọ a ka a chọrọ:
Hapụ 2.16 nwa oge ma bido ịrụ ọrụ na ụdị nke 3.0 dị ka ihe kacha mkpa, yana windo mmepe nke ọnwa asatọ. Mgbanwe emere na mbipute 8 ga-achọ dakọtara na ụdị nke 2.16 (lee python3.0 / pytq3).
Mwepụta ozugbo gaa na 3.0 na windo gbakwunyere na QT5, Python 3.0 na PyQt5, ma jụọ ndị mmepe iji rụọ ọrụ ha na 3.0. Gaa n'ihu na nsụgharị 2.x ruo ugboro ugboro ruo mgbe 3.0 dị njikere.
Nwere uzo ozo? QGIS nwere mmasi imata ihe ndi ozo nwere ike ime. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefere a amaghị, biko ziga ka tim@qgis.org ya na isiokwu "QGIS 3.0 Providence".
Ọ dị mfe ịgbaso QGIS blog, ebe akwụkwọ a si.
Previous Post«Previous Foto 13 nke akụkọ ihe mere eme nke Entzụ ahịa mmadụ
Next Post Ndị ọzọ iji jiri QGIS na ekwentị mkpanaaka na iOSNext »